विश्वकै अनौठो रहस्यले जहा अचम्मको परम्परा !!हरेक तीन वर्षमा गाडेको ठाउँबाट निकालिन्छ श’व – News Nepali Dainik
विश्वकै अनौठो रहस्यले जहा अचम्मको परम्परा !!हरेक तीन वर्षमा गाडेको ठाउँबाट निकालिन्छ श’व
प्रकाशित मिति: बिहिबार, फाल्गुण २०, २०७७ समय: २०:१०:४६
विश्वकै अनौठो रहस्यले भरिएको छ । आज पनि सारा विश्वमा अनौठो कुराको केहि कमी छैन । कतै परम्परा त कतै मान्यताका कारण रहस्यमय बनेको यो विश्वमा कतिपय घ’टनाहरु त हामीलाई सुन्दा र देख्दा समेत विश्वास हुँदैन ।
एउटा यस्तै परम्परा इण्डोनेशियाको एक जनजातीमा पनि रहेको छ । उनीहरुको यो परम्परा एक उत्सवको रुपमा प्रख्यात छ ।सुलावेसी द्वीपको टोराजन जातीको नेने फेस्टिभल अनौठो र डरलाग्दो छ ।
यसमा उनीहरु श’वलाई हरेक तीन वर्षमा गाडेको स्थानबाट निकालिन्छ । उनीहरुलाई त्यो बेलामा सरसफाई गरिन्छ र नयाँ कपडा लगाईदिइन्छ ।उनीहरुले मृ’त्युपछि फेरी अर्को यात्राका लागि निस्किनुपर्ने भन्ने मान्यताका कारण यसो गरेका हुन् ।
उनीहरुले मृ’त्युपछि फेरी अर्को यात्राका लागि निस्किनुपर्ने भन्ने मान्यताका कारण यसो गरेका हुन् ।यो फेस्टिभल मनाउने परम्परा १०० वर्ष पहिला देखिको हो । त्यहाँका बुढापाका बताउँछन्, एक शिकारी शिकार गर्न जंगल गएका थिए ।उनले जंगलमा एक सडेको श’व देखे ।
त्यसपछि उनले नयाँ कपडा लगाईदिएर अन्तिम संस्कार गरिदिए ।त्यसपछि उक्त शिकारी धेरै भनवान भएको र समृद्धशाली बनेको उनीहरुको भनाई छ ।
Last Updated on: March 4th, 2021 at 8:13 pm